Izesekeli ongeke uziphuthe ukuze uqede ihlobo [RAFFLE] | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | | Imincintiswano, General, Izaziso
Ihlobo selivele lisele cishe nenyanga, ngakho-ke kufanele sicabange ngokulisebenzisa ngokugcwele, inqubo izosivulela ngokushesha, ngakho-ke kufanele sisebenzise wonke umzuzu njengokungathi owokugcina. Ukwenza lezi zikhathi zife futhi sihlale sixhumene nalabo abasondelene nathi, imvamisa siphatha omakhalekhukhwini bethu, nokuthi kulezi zikhathi zamanzi nediphu kuyingozi… akunjalo? Sikulethela iqoqo lezesekeli okungafanele uphuthelwe ukuqeda leli hlobo futhi uthole okuningi kulo kwaCellularline. Futhi, sizobaphikisa bonke, ngakho-ke yisikhathi esihle sokuthi ungene futhi ubambe iqhaza, ucabangani?
1 Vikela iselula yakho ngekhava
2 Icala elingangenwa ngamanzi ukuze ungamanzi ifoni yakho
3 Izithombe ezinhle kakhulu ngenduku yakho ye-selfie
4 Ungabamba iqhaza kanjani ku-raffle:
Vikela iselula yakho ngekhava
Siqala ngezinto eziyisisekelo, ikesi ledivayisi ephathekayo, manje njengoba sisezicijaneni kanye nezikhindi ezimfishane, akuyona into engavamile ukuthi ifoni yethu eyigugu iphume ephaketheni lethu. Kungakho kubalulekile ukuthi ivikelwe kahle, nokuthi i-Cellularline iyazi isikhashana. Leli cala le-silicone linamathela ngokuphelele ekwakhiweni kwe-smartphone yakho, ngenkathi ihlinzeka nge- ukuvikelwa okuphelele yamakhona akho, imiphetho namachweba. Ingaphakathi linengubo ethambile, emelana nokuklwebheka i-microfiber, kanti isiphetho sangaphandle senziwe nge- impahla ethambile yokuthinta. UBUZWA iyatholakala okuluhlaza okwesibhakabhaka, okumnyama, okubomvana nokubomvu ye-iPhone 7, 8, X ne-XS.
Leli cala lisikhumbuza icala le-Apple Silicone futhi liveza izinto zokwakha ezinhle kakhulu. Iwugqinsi, iyamelana futhi ayisheleli, futhi ihlanganisa nengxenye engezansi yedivayisi ngakho-ke ngeke sithole imihuzuko engalindelekile ohlakeni. Izikhala zokuxhuma nekhamera zenziwe kahle futhi, maqondana nalezi zakamuva, ivikelwe kahle ngoba iyakuvimbela ekushibilikeni ebusweni.
Icala elingangenwa ngamanzi ukuze ungamanzi ifoni yakho
IGagasi leVOYAGER Kuyicala eliphelele elingangenwa manzi ukusebenzisa i-smartphone yakho olwandle ngokuphepha okuphelele nokunethezeka, ukuyivikela emanzini, esihlabathini naselangeni. Impahla yayo ethambile neqonde phambili ikuvumela ukuthi usebenzise i-smartphone ngendlela enethezekayo futhi ephathekayo, ngaphandle kokulahlekelwa ukuzwela esikrinini. Inesitifiketi se-IPX8, esiqinisekisa ukuvinjelwa kwamanzi kungafika kumamitha angama-20 ukujula. Ngaphandle kokonga ifoni yakho ephathekayo uma uthatha idiphu ngephutha, ikuvumela ukuthi uthathe izithombe ezinhle ngaphansi kwamanzi. Ifaka ibhande eliqinile lokubamba ngemuva ukuze ama-selfies aphume ephelele. IVoyager Wave iyahambisana nezingcingo ezingamaselula ezifika ku-5,7 ”kungakhathalekile ukuthi ikhiqizwa ngubani.
Sizokwazi ukuthola lesembozo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, opinki futhi omnyama impela. Ungaxhumana kalula nesikrini uthathe izithombe, futhi inentambo yokulwa nokulahleka. Nakanjani… kungani uzibeka engcupheni yokuthola ukuthi amanzi abe manzi uma kungenasidingo ngokuphelele? Kungakho ngincoma ukusetshenziswa kwalezi zimbozo lapho siya olwandle nasechibini, ngoba Ngeke nje kusivikele emanzini, kepha futhi nasothulini, okuvame kakhulu kulezi zindawo futhi okwenza izixhumi nezinkinobho zibulale.
Izithombe ezinhle kakhulu ngenduku yakho ye-selfie
Nge Induku yeselfie yomugqa weselula ungathatha ama-selfies ngokunethezeka kakhulu ngenxa yayo 11.5 cm yinde lapho isongwe. Ngaphezu kwalokho, ngeke ube nentambo eyodwa phakathi kokubonga ubuchwepheshe bayo I-Bluetooth 4.0. Futhi uma lokho bekunganele, kunjalo iyahambisana nezinhlelo zokusebenza ze-Android ne-iOS.
Ungabamba iqhaza kanjani ku-raffle:
Kulula, sikumema ukuthi ufake le vidiyo esiteshini sethu se-YouTube bese ubeka "Ngibamba iqhaza" kumazwana abekiwe. NgoMgqibelo olandelayo, ngoJulayi 31, 2019, sizobiza abawinile ku-Twitter yethu (@agadget) futhi sizothumela ekhaya umklomelo owutholile: induku yeselfie, ikesi elingangeni manzi noma ikesi le-iPhone X / XS. Ungabe usacabanga ngakho, ukudweba kukhululekile ngokuphelele, yebo, kungudwebo lukazwelonke, eSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Izesekeli ongeke uzikhumbule ukuqeda ihlobo [SWEEPSTAKES]
Ukubuyekezwa kwehedfoni ye-HolyHigh HV-368